Marwada Koowaad ee dalka oo maal gelisay Barnaamij indha fiiqid loogu sameynayo dad danyar ah “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Marwada Koowaad ee Dalka Maamo Seynab Cabdi Macallin ayaa maal-gelisay barnaamij indha fiiqis loogu sameynayo boqolaal ka mid ah dadka araga waxyeellada ka qaba.
Wajiga koowaad ee barnaamijkan ayaa waxaa ka faa’iideystay 50 qof oo kunool magaalada Muqdisho, iyadoona la qorsheynayo in laga hirgeliyo meelo kala duwan oo ka mid ah dalka si tirada ugu badan ee dadka danyarta ah ay uga faaiideystaan.
Xasan Macalin Xasan Culusow oo 15 sano ka hor aabihii uu aragga ka naafoobay ayaa ka mid ahaa dadkii lagu guuleystay in qalliin lagu sameeyo, dibna uu Alle ugu soo celeyey araggiisa.
“Aabaheey Macalin Xasan Culusow waxa uu ishaan la’aa muddo 15 sano ah, maantana waxbuu ka arkaa, dadku in wax loo qabto waa ay jecel yihiin, Maamo Seynab iyo maamulka cisbitaalka waa u mahacelineynaa” ayuu yiri Xasan isagoo la hadlaaya Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed SONNA.
Sidoo kale Dr Maxamed Amiin Cumar oo hoggaaminayay dhaqaatiirka qaliinka indha fiiqista ah sameeyay ayaa sheegay in dadka indhaha ay u fiiqeen ay yihiin wajigii koowaad, isaga oo tilmaamay in maalmaha soo socda ay qaliimo u fulin doonaan qaar kale oo ka mid ah dadkan.
Maalinta talaadada ah ee soo socota ayaa waxaa bilaaban doona wajiga labaad ee barnaamijkan indha fiiqidda loogu sameynayo dadka danyarta ah.
Akhriso: Ra’iisul wasaare Kheyre oo magacaabay guddiga Qaran ee qaban-qaabada Todobaadka Xorriyadda